Etu esi atụ ROI nke ngwa ngwa ekwentị | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 9, 2014 Douglas Karr
Anyị na ụlọ ọrụ ibe anyị na-arụkọ ọrụ iji mepụta ngwa mkpanaka maka gam akporo na iOS ugbu a. Mgbe anyị mere ngwa nke anyị, ngwa ọdịnala a chọrọ ka elebara anya karịa ka anyị chere. Echere m na ọ na-ewe oge iji rụọ ọrụ na ahịa, ntinye, na mbipụta nke ngwa mkpanaka karịa oge mmepe ngwa! Anyị ga-edozi atụmanya maka ọrụ dị ka nke a n'ọdịnihu.
Ngwa a bụ ngwa nnọchi maka ndị ahịa wuru onye na-eme mgbako maka ndị ahịa ha - ọkachasị ndị injinia. Ọ bụ ngwa na-enweghị isi na-enyere ndị injinia aka ịme ọtụtụ puku nyocha dị mfe. Ngwa ahụ adịghị ere ihe ọ bụla ma ọ bụghị -eri ihe ọ bụla. Ngwa a bu iji nye ndi ahia uru. Toolszụlite ngwá ọrụ dị ka nke a iji mee ka ọrụ ndị mmadụ dị mfe bụ usoro ịzụ ahịa dị ukwuu n'ihi na ọ na-emetụ ndị ahịa aka ugboro ugboro ka ị wee nọrọ n'elu uche mgbe ha chọrọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Dịka ngwa eji dochie anya, ọdịiche anyị chọpụtara (na mpụga ụfọdụ atụmatụ na-ezighi ezi) bụ na ọ nweghị mmekọrịta ọ bụla na ngwa mkpanaka n'etiti ụlọ ọrụ na onye ọrụ. Ya mere, anyị gbakwunyere kọntaktị dị mfe na pịa-na-okwu atụmatụ, yana ịdọrọ na ha Youtube Olee otú-Iji vidiyo na ntanetị ọhụrụ ha. Site n'ịkwanye ndepụta ndị ahụ na onye ọrụ ahụ, ngwa mkpanaka ahụ na-enye ọnụ ụzọ ka mma nke ọma iji wulite nlọghachi ka mma na itinye ego yana ikekwe ọbụna nweta ụfọdụ ahịa na ojiji.
Ma ị na-elekwasị anya n'ịchịkọta ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ, ihe omuma a na-ekpuchi ntọala niile: ịkọwapụta ebumnuche gị, nyocha ego, ịtọ ndị KPI, na iru ọnụego ROI na oyi, ọnụ ọgụgụ siri ike. Gafee atụmatụ na usoro na nha nha nke na-egosi na mbugharị ụlọ ọrụ na-agbakwunye. Jason Evans, SVP, Atụmatụ & Innovation Management
a infographic si Kony na-ejegharị ihe nrịbama ahụ site n'akụkụ niile dị iche iche nke ịgbakọ Nloghachi na Ntinye ego maka ịmepụta ngwa mkpanaka site na iji usoro NPV (Net Present Value). Maka ozi ndị ọzọ, dị njikere ibudata Kony's Whitepaper Atụ Mobile: ankọwapụta thega nke Ọma nke Mobile Mobile gị.
Tags: infographicezennweta ngwa mkpanaakaakwụ ụgwọ ngwa mkpanaakaihe mgbaru ọsọ nke ngwa mkpanakangwa mkpanaka kpisọnụego njigide ngwa ngwamobile ngwa roimobile ngwa nloghachi na egommepe mobilemobile mmetụtaekwentị mkpanaaka infographicmobile ndu nnwetaekwentị mkpanaakaụgbụ bara urunpvlaghachi azụmaahịangụkọta ego nwe
Oghere: Paswọdu Paswọdu na Ahụmịhe Onye Ọrụ
Dec 10, 2014 na 10:22 PM
Ezigbo infographic, ekele maka ọrụ gị.